गृह मन्त्रीका राजनीतिक सल्हाकार सूर्य सुवेदीको दादागरी, अपहरण शैलीमा लगे अपराधी जस्ता व्यहवार गरेः डा.अधिकारी -
गृह मन्त्रीका राजनीतिक सल्हाकार सूर्य सुवेदीको दादागरी, अपहरण शैलीमा लगे अपराधी जस्ता व्यहवार गरेः डा.अधिकारी
२९ असार २०७५, शुक्रबार १३:५९ 836 पटक हेरिएको
काठमाडौं- दिउँसोको करिब साढे तीन बज्दै थियो, ट्रमा सेन्टरको ओपीडीमा म बिरामी जाँचिरहेको थिएँ। मेरो मोबाइलको घण्टी एक्कासी बज्यो, नम्बर अपरिचित थियो। तैपनि मैले केही अर्जेन्ट होला भनेर उठाएँ। उताबाट आवाज आयो, ‘म गृह मन्त्रालयको सचिवालयबाट बोलेको, तपाईंलाई गृहमन्त्रीजीले खोजिरहनुभएको छ । अर्जेन्ट यहाँ आउनुपर्यो ।’ त्यसपछि म झस्किएँ।
मैले भने, ‘म ओपीडीमा बिरामी जाँचिरहेको छु।’ उताबाट भनियो, ’गृहमन्त्रीले खोजिरहनुभएको छ भन्दा सुन्नु भएन ? तुरुन्त आउनूस्।’ मैले भने, ‘मसँग साधन छैन, अलि समय लाग्छ ।’ फेरि आवाज आयो, ‘म गाडी पठाइदिन्छु । तुरुन्त आउनूस्।’ मैले ‘हस्’ भन्दै फोन राखें।
केही समयपछि वीर अस्पताल परिसरमा गृहको गाडी आइपुग्यो। त्यतिबेला म ग्राउन्डमा झरिसकेको थिएँ। म गाडी चढें र गृह मन्त्रालय पुगें। गाडीमा ड्राइभर मात्र थिए।
मन्त्रालय पुगेपछि मलाई केही समय बाहिरै पर्खिन आदेश दिइयो। म मनमा ‘किन बोलाउनुभएको होला’ भन्ने सोच्दै त्यहीं कुरिरहें। कसैले केही मतलब गरेनन् र बोलाएनन्। अर्जेन्ट भनेर बोलाइएको मलाई एक घण्टासम्म पनि कसैले नबोलाउँदा अचम्म लाग्यो । मैले आफैंले प्रहरीसँग सोधें, ‘मलाई गृहमन्त्रीजीले अर्जेन्ट भनेर बोलाउनुभएको डेढ घण्टा कुरिसकें, खबरै आएन।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीको केरकार, व्यवहार र शैली हेर्दा मलाई लाग्यो, मानौं म एउटा अपराधी थिएँ।
ती प्रहरीले भने, ‘तपाईंलाई केही समय कुर्न आदेश छ।’ ठीकै छ भन्दै बाहिरै बसिरहें। डेढ घण्टा कुरेपछि मलाई भित्रबाट बोलावट भयो। मलाई गोप्य कोठामा लगियो। त्यहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्थेन। मन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले मसँग केरकारको शैलीमा कुरा थाले। उनको व्यवहार र शैली हेर्दा मलाई लाग्यो, मानौं म एउटा अपराधी थिएँ। उनले आदेशात्मक शैलीमा भने, ‘तपाईंको रिपोर्ट राम्रो आएन, यसलाई करेक्सन गर्नुभएन भने राम्रो हुँदैन।’
यस्तो कुरा सुनेर म स्तब्ध भएँ। मैले सोधें, ‘यसमा केही त्रुटी भयो र?’ उनी फेरि कड्किए, ‘त्रुटीस्रुटी था’छैन, यो सच्याउनु पर्‍यो।’
‘हस्’ भन्दै म निस्किनै लागेको थिएँ । उनले थपे, ‘तपाईं र म एउटै जिल्ला (चितवन) को मान्छे। त्यस्तो केही नमान्नुहोला। गृह मन्त्रालयमा यस्तै हुन्छ।’
उनको समग्र कुराको आशय थियो, द्वन्द्वको चपेटामा परेका बिरामी तथा घाइतेहरू आएमा गृहको आदेशअनुसार रिपोर्ट बनाएर पठाउनुपर्ने। ‘कसैको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेगरी गलत रिपोर्ट बनाउन हाम्रो व्यावसायिक धर्मले दिँदैन,’ मैले सीधा जवाफ दिएँ।
त्यसपछि म निस्किनै लागेको थिएँ। गृहकै ड्राइभरले पुर्‍याइदिन्छु भने र गाडीले मलार्इ लािजम्पाट छोडिदियो। त्यहाँबाट आइसकेपछि साँझ परिसकेको थियो। मेरो मुड ठीक थिएन, म सीधै घर गएँ। यो घटनाबारे कसलाई भन्ने भनेर म अन्योलमा थिएँ। त्यसपछि विस्तारै बाहिर आयो।
मेरो करिअरमा यस्तो घटना कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन।
यस्तो उच्च सम्मानित ठाउँबाट हामीजस्तो व्यावसायिक मान्छेहरूलाई यस्तो व्यवहार गर्नु ठीक होइन।
वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत प्रा. डा. भोजराज अधिकारीलाई मंगलबार फिल्मी शैलीमा गृह मन्त्रालय लगियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आदेश भन्दै एउटा गोप्य कोठामा राखेर द्वन्द्वमा घाइते तथा अंगभंग भएकाको स्वास्थ्य रिपोर्ट सच्याउन दबाब दिइयो। तर, उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। यो सबै घटनाक्रमका बारेका डा. अधिकारीसँग नेपाल समयमा लागि दिलिप प्रकाश कार्कीले गरेको संवादमा आधारित।